Ny zazavavy kely 12 dia manampy ny reniny niteraka saingy ny zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy - HEALTH PLUS MAG - TELES RELAY
HOME » SOSO-KEVITRA Ny zazavavy kely 12 dia manampy ny reniny niteraka saingy ny zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy - SANTE PLUS MAG
Ny zazavavy 12 dia manampy ny reniny niteraka saingy ny zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy - SANTE PLUS MAG
TELES RELAY Janoary 12 2019
tonga soa / Psycho & Sexuality / psikolojia / Personal Development /
Ny zazavavy kely 12 dia manampy ny reniny niteraka saingy ny zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy
Amin'ny ankapobeny, ny zazavavy dia tsy tafiditra ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Ho an'ity tovovavy 12 ity dia fahagagana satria ho vitany ny hanatrika sy handray anjara amin'ny fahaterahan'ny zandriny. Tantara mampihetsi-po sy tsy mahazatra izany.
Ny fiterahana dia hetsika maharary sy miezaka ary manafaka amin'ny fiainan'ny vehivavy. Raha toa ka antenaina fa ho ela ny renin'ny hoavy, rehefa tonga ny andro D, mampijaly azy ireo ny alahelo mahatsiravina. Rehefa tonga ny andro fivoahana, dia mifamatotra ny zavatra rehetra ary misy fanontaniana maromaro mandalo ao an-tsain'ny reny.
Tamin'ny andron'ny fahaterahan'i Dede Carraway, tsy misy na inona na inona maneho fa ny fiovana tsy nisy teo aloha dia hahita ny hazavan'ny andro. Efa nanomana ny zava-drehetra ho an'ny fandefasana azy izy ary tsy nieritreritra fa hisy olona iray hiondrika anio, izay tena akaiky azy kokoa.
Tonga avy amin'ny mpitsabo aretin-tsaina io fandraisana andraikitra io ary nahafaly ny rehetra. Soa ihany fa nisy olona iray teo mba hisambotra io fahatsiarovana miavaka io izay hanamarika ny family mandrakizay.
Rehefa niditra ny efitrano fanafody i Jacee, zanakavavin'i Dede, dia natahotra iray ihany izy: tsy nahatsiaro ny nahaterahan'ilay zandriny. "Nanomboka nitomany aho satria nieritreritra fa tsy hahita azy teraka satria mbola kely loatra aho", hoy izy nanahy ny ankizivavy tao amin'ny mikrô. News Now. Saingy tsy voatanisa amin'ny dokotera Dede, Dr. Wolf, izay nandrombaka ny tsy nampoiziny an'i Jacee kely.
Na iray na roa, fa tsy ny olona mihetsiketsika sy ny fanavahana toerana ho an'i Jacee mba hahafahany manatrikafiterahanaNanolo-kevitra zavatra vaovao i Dr. Wolf. Nanontany an'i Jacee izy raha toa ka hanampy azy hitondra ny zandriny ho an'izao tontolo izao.
Tsy nanaiky avy hatrany i Dede sy Jacee. Marina fa tsy ny zaza vao teraka akory no ankizivavy kely. Saingy nanome toky ilay reny sy i Jacee ny dokotera na dia nisalasala aza izy ireo ary farany dia nanampy azy hamelona ny zanany. Fotoan-dehibe iray ho an'ny zazavavy kely izay tsy maintsy nanamboatra mpampivelona tamin'ny fanampian'ny dokotera.
"Navelany nidina aho ary nalaiko ilay zaza ... toy ny milalao ny dokotera ary izany no zava-misy. Tena natahotra aho "hoy i Jacee.
Ary mora lavitra ny fandefasan'i Dede. Tsy niasa ny epileura ary noho izany dia niaritra fanaintainana mafy. Fa ny tarehin'i Jacee nanampy azy hitoe-jaza dia nanome azy ny fampiononana rehetra nilainy. Rehefa tonga ny fotoana fanafahana, dia niteraka zazalahy kely 3 kilos sy gramin'i 170 antsoina hoe Cayson Carraway i Dede.
"Nahatonga ahy te hitomany ny nahita ireo fihetsehampo teo amin'ny tarehin'i Jacee. Hiantso fotsiny aho eo fotsiny. Fotoana tena tsara ho ahy izany, "hoy izy News Now.
Ahoana no hiomanana amin'ny famindrana?
Ny fitaterana dia mitaky fanomanana. To face the adin-tsaina ary ny ezaka ara-batana tokony hataon'ny reny, dia ilaina ny manome fitaovana sy torohevitra feno fahendrena mba ho vonona amin'ny andro lehibe. Maro ny fanabeazana sy fiaraha-mientana afaka miomana amin'ny fiterahana toy ny:
Nivoaka voalohany ity lahatsoratra ity FAHASALAMANA HEALTH PLUS
Sophia Loren manamafy fa mety ho tsara tarehy sy mahitsy amin'ny taona 81 ary mampiseho ny tsiambaratelon'ny hatsarany mandrakizay! - SANTE PLUS MAG
Fantaro ny fomba hahatsiarovana ny olonao: toro-hevitra 8 mba hahatonga anao ho tena ilaina amin'ny fiainanao - SANTE PLUS MAG
OLONA SY FAHAFAHANA11 533
Prince Philip efa miverina? Ny Duke dia nandefa ny fiara vaovao HOURS taorian'ny fianjerana